कस्तो छ ? स्वर्गको द्वार | मझेरी डट कम
editor — Wed, 09/11/2013 - 19:46
नेपाल भू-भाग पहाडबीच
वि.सं. २०७० साल, आषाढ मासको १ गते शनिबार थियो । यात्राको लागि यही मिति तय भयो । सवारी साधनको व्यवस्था मिलाइसकिएको थियो । सोही दिनको बिहान ठीक ९.३० बजे प्रगतिनगर गा.वि.स. वडा नं. ३ र ४ का तीर्थयात्रीहरू भीमप्रसाद आचार्य, खगीदेवी आचार्य, कृष्ण आचार्य, गोमा आचार्य, सरस्वती खनाल, निर्मला न्यौपाने, शान्ति पौडेल, रुककुमारी क्षेत्री र म लगायतका नौजनाको एउटा टोली ३५९६ लु. १ च नं. को गाडीमा बसेर प्यूठान जिल्लामा अवस्थित स्वर्गद्वारी पुण्य भूमिको दर्शनार्थ प्रस्थान गर्यौँ । हाम्रा गाडीचालक भाइ बद्री चौधरीसित हामी १० जना भयौँ । यसरी हामी स्वर्गद्वारी पुण्य भूमिको दर्शनार्थ नवलपरासीको दाउन्ने पहाडमा अवस्थित दाउन्ने देवीको दर्शन गरेर वर्दघाट, सुनौल र भुमही हुँदै रूपन्देहीको बुटवल नगरतर्फ अगाडि बढ्दै गयौँ । गृष्मऋतुको प्रखर गर्मी याममा पनि हामीलाई घामले अत्याएन, दिन शीतल पर्यो । न वर्षा न घाम, हामी धेरै आनन्दित भयौँ । भनाइ पनि छ - यात्रामा साथी मिल्नुपर्छ, यात्रा रमाइलो र सुखदायी हुन्छ । भन्छन् - यात्रामा हिँड्दा केही खानेकुराहरू पनि बनाएर बोक्न सके बेलाबखत भोकको तोक पनि छोपिने र सबै मिलेर खाँदाको स्वाद छुट्टै रमाइलो हुन्छ रे । जानेका त हौँ, तर म आफूलगायत खानेकुरा नबोक्ने अरू साथी पनि थियौँ । तर सरस्वती खनालले लगेका खानेकुराहरूको पोको भने ११.३० देखि नै फुक्यो । यसबेला हामी रूपन्देही जिल्ला छोडिसकेका थियौँ । कपिलवस्तु जिल्लाको गोरुसिङ हुँदै ठीक १२.५५ मा हामी भालुवाङ पुगिसकेका थियौँ । त्यहाँनिर अर्घाखाँची जिल्लाले थोरै दाङ जिल्ला छुँदो रहेछ । भालुवाङमा हामीले १/२ घण्टा आराम गर्यौँ, फलफूल किन्यौँ र ठीक १.१५ बजेको थियो, हामी भालुवाङबाट छिरेर शान्तिपुर हुँदै गनाहा खोलाको पुल तरेर प्यूठान जिल्लामा प्रवेश गर्यौँ । आफ्नो देशको विविधतामा रमाउँदै मीठा-मीठा गफ मार्दै र कविता वाचन गर्दै हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरह्यो, बढिरह्यो । चारैतिर प्रकृतिको राज, असाध्य रमाइलो जङ्गल, खोला, खेतबारी । गृष्मको याम, मन्द हावाको स्पर्श आनन्ददायी यात्रा बनेको थियो । पश्चिमी क्षेत्रको विविधता ज्यादै गर्व लाग्यो, यसैबेला मलाई एक श्लोक मुक्तक पनि फुर्यो --
खोला-नाला पार गरी हेर्दै रातो माटो
अघि बढ्यौँ स्वर्गद्वारी काफल-चुत्रो खाँदै
मोतीपुर हुँदै उकाली-ओराली गर्दै च्युरीका बोट र लटरम्म फलेका फल देखेर लोभिँदै जुडापाटाको माध्यमिक विद्यालय पुगेका थियौँ । प्यूठानको सारी गाउँ नेपालको एउटा सुन्दर गाउँ रहेछ । अब बिस्तारै हामी स्वर्गद्वारीको फेदीमा पर्ने भिङ्ग्री गाउँमा पुगेका थियौँ, जहाँबाट स्वर्गद्वारी आश्रममा पुग्न १४ कि.मी. कच्ची बाटो गाडीमा उक्लेर २ कि.मी. लगभग पैदल हिँड्नुपर्ने रहेछ । भिङ्ग्री कोटमा हामी १/२ घण्टा बसेका थियौँ, चारैतिर पहाडको दृश्य अवलोकन गरेर । त्यहाँ नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि. रहेछ । पातलो गाउँ भेटियो । बाटोमा बसेका साना-साना भाइबहिनीहरू रहेछन् । तिनीहरू विद्यालयमा पढ्दा रहेछन् । हामीले प्रश्न सोध्यौँ, पोशाक र अन्य रहनसहनको तुलनामा यी भाइबहिनीहरू धेरै दक्ष रहेछन् । मलाई यतिबेला महाकवि देवकोटाको भनाइ स्मरण गर्न मन लाग्यो । जस्तै --
यसरी हर्ष र खुसीका साथ ६.४५ बजे झण्डै २ कि.मी. तल सवारी साधन थन्काएर एकघण्टा उकालो बाटो पैदल हिँडी हामी स्वर्गद्वारी मन्दिर परिसरभित्र छिरिसकेका थियौँ । मौसमले साथ दिएको थियो । गृष्मऋतुमा पनि गर्मीको कुनै आभास नहुने स्वर्गद्वारी साँच्चै स्वर्गजस्तै अनुभूत भयो । चारैतिर पहाडका चुचुरासित मितेरी लगाएको नीलो आकाशको सामीप्यताले हरियो जङ्गलसित जोडेको गाढा सम्बन्ध नवदम्पत्तिको प्रेम-मिलनभन्दा कम महत्त्वको भनेर आँकलन गर्न सकिन्नथ्यो । मलाई एउटा हाइकु लेख्न मन लाग्यो --
आश्रममा खान-बस्नको लागि टिकट लियौँ । रु. ७० खाना परहेड र एक बेडको रु. ५० लाग्दो रहेछ । हामीले बस्नको लागि २ नम्बर कोठा जहाँ ६ वटा बेड थिए, दस जनाको लागि रिजर्भ नै गर्यौँ । आश्रमको दालभात, तरकारी खाएर त्यहाँका भान्सेहरूसँग केही अन्तर्वार्ता लियौँ जसबाट हामीलाई निम्न कुराहरू पत्तो लागे स्वर्गद्वारी पुण्य भूमिको बारेमा --
(१) तपोभूमिको रूपमा प्रसिद्ध रहेछ स्वर्गद्वारी,
(२) त्रिकालदर्शी बालतपस्वी स्वर्गद्वारी महाप्रभुले सनातन धर्मको मर्यादा कायम राखी विश्वकल्याणार्थ अखण्ड महायज्ञसहित स्वर्गद्वारी आश्रमको बलियो जग बसाल्नुभएको रहेछ ।
(३) बालतपस्वी हंसानन्द गिरीको जन्म वि.सं. १९१६ मा रोल्पाको रुम्टी भन्ने ठाउँमा भएको रहेछ ।
(४) वि.सं. १९५२ मा उहाँको व्यक्तिगत प्रयासबाट संस्थापित एवम् सञ्चालित यो संस्था गुरुशिष्य परम्पराबाट अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालित रहेछ ।
(५) वेदब्यासजस्ता त्रिकालदर्शी महर्षिले यही ठाउँमा ठूला-ठूला यज्ञ गरेका रहेछन् । पाँच पाण्डवहरू यही ठाउँमा तपस्या गरेर स्वर्ग प्रस्थान गरेको जनश्रुति पनि रहेछ । सत्ययुगमा प्रजापति ब्रह्माले यही स्थानमा ठूलो यज्ञ गरेर शक्ति सञ्चय गरी सृष्टि गर्नुभएकोले यो स्थान यज्ञभूमिको रूपमा प्रख्यात रहेछ । यसरी ठूला-ठूला ऋषिमुनिजन यही यज्ञभूमिलाई महत्त्व दिएर कठीन तपस्या गरी यहीँबाट स्वर्ग प्रस्थान गरेको हुनाले स्वर्ग जाने ढोका/द्वारको रूपमा स्वर्गद्वारी भनिएको जानकारी पायौँ ।
(६) राप्ती अञ्चलअन्तर्गत प्यूठान जिल्लाको अग्लो शैलशिखरमा अवस्थित यो पावन क्षेत्र स्वर्गद्वारी समुद्रसतहबाट करिब ८०००। फिट उचाइमा पर्दो रहेछ ।
(७) नित्य ८० ब्राह्मणहरूले हवनकुण्डमा हवन गर्दछन् ।
(८) देउखुरीमा र दाङमा गरेर ६ मौजा जग्गा रहेछ स्वर्गद्वारी आश्रमको ।
(क) यज्ञशाला ः
(ख) गुफा ः
(ग) शिवालय ः
(घ) सिद्धस्थान ः
(ङ) बाँझ वृक्ष ः
(च) गौमाता ः
जामुनो, काफल, साल, बाँझ, साज, बाँस, गुराँस, देवदारु र पाखरीजस्ता ठूला-ठूला वृक्षहरू अनि कमला, केसर, त्रिपत्री, कखीरजस्ता पुष्पका रुख हुनुको साथै अनेक प्रकारका लताकुञ्जले स्वर्गद्वारीलाई शोभा दिइरहने रहेछन् । वरिपरि जङ्गलमा कृष्णसार, मृग, सिंह, बाघ, चित्तल, भालु र दुम्सीजस्ता वन्यजन्तुहरूसँग स्वर्गद्वारीका हजारौँ गाई र साँढेहरूले नाता कायम गरी स्वच्छन्द घुमफिर गर्दा रहेछन् । यो पनि प्रभुकै कृपा हो, आजसम्म यी जनावरहरूका बीच वैरभाव देखिएको छैन रहेछ ।
हामी पुग्दाको दिन आश्रममा भोजन गरेर आश्रममै बस्यौँ । मस्त निद्राबाट ब्यूँझँदा मुसलधारे वर्षा भएको रहेछ । यो २०७० आषाढ मासको २ गते थियो । हामी उठेर स्नान गरी पूजाको लागि तयार भयौँ । वर्षामा भिज्दै मन्दिरभित्र प्रवेश गर्यौँ ८.३० बजेसम्म पूजा र अर्चना सकेर आश्रमको भान्सामा चिया पियौँ । पानी परिरहेकोले जाडोले गर्नुगर्यो । यहाँ नियमित वेदको पढाइ हुँदो रहेछ । ३०० जना विद्यार्थी गुरुकुलको फ्रि अध्ययन गर्दा रहेछन् । पूजा, रुद्रीपाठ र होमन गर्न २४ जना ब्राह्मणहरू नित्य खट्दा रहेछन् । ६ जनाले आश्रमको भान्सा चलाउँदा रहेछन् । ४०० गाई र ५० भैँसी आश्रम परिसरमा रमाउँदै डुल्दा रहेछन् । अविरल वर्षाको कारण तेस्रो दिनसम्म हामी स्वर्गद्वारीमा रहन बाध्य भयौँ । तेस्रो दिनमा पानीले थोरै विश्राम लिएको समय हेरेर हामी धरमपानीसम्म झर्यौँ । भिङ्ग्रीको बाटो पहिरोले ब्लक भएको कारण हामी दाङ-घोराही हुँदै फर्किने अठोट त गर्यौँ, त्यो बाटो पनि बीच-बीचमा गाडी जाम भएको कारण बन्द थियो । झण्डै ३.३० बजे एक होटलमा बास बस्यौँ । त्यो ठाउँमा हामी जेष्ठ ५ गतेसम्म रहनु पर्यो । ४ गते रातिबाट वर्षाले विश्राम गर्यो । हामी ५ गते बिहान ६ बजे धरमपानीबाट टाप कस्यौँ । अब हामी दाङ-घोराही हुँदै घर फर्कने अठोट गर्यौँ । हामीहरू बाटोमा फँसेका गाडीहरूकै उद्धार गर्दै बाटो बनाएर आफ्नो गाडी पास गर्दै अगाडि बढेका थियौँ । सुनिल चापागाई, नारायणगढबाट गएको टोलीको ड्राइभर, डिल्लीराम सापकोटा, रामप्रसाद भण्डारी, हामी बास बसेका घरभेटी भाइ देबेन्द्र बूढा र हामी सबैले बाटो सफा गर्दै प्यूठानको स्वर्गद्वारी गा.वि.स. छोडेर अगाडि बढ्यौँ । भारतको उत्तरखण्डमा अवस्थित अति प्रचलित केदारनाथ र बद्रीनाथ तीर्थस्थल बाढीले बगाएको विचल्ली अवस्थाप्रति खेद प्रकट गर्दै हामी हिक्मत नहारी अब रोल्पा जिल्लातर्फ उन्मुख हुँदै थियौँ ।
गाउँलेहरूले नेपालको हरिया पहाडमा त्यसै टल्केका रोल्पा जिल्लाका अनुपम सुन्दरतालाई प्रदर्शन गरेका थिए । कुहिरो रोल्पाको भ्रमणमा थियौँ । हामी भने बाटोभरि पाकेको चुत्रो र टिमुर टिप्दै यात्रालाई स्मरणीय गराएका थियौँ । रोल्पाका आकर्षक ग्रामीण क्षेत्रले हाम्रा आकर्षक ग्रामीण क्षेत्रले हाम्रा आँखा तानिरहेका थिए । यसबेला ११ बजेको थियो, हामी थियौँ रोल्पाको होलेरी बजारमा लगभग १२ बज्दा रोल्पा जिल्लालाई नमस्कार गरी दाङसित मितेरी लगाएका हौँ । यसरी हामी दाङ जिल्लाको दुई खोली हुँदै १.३० बजे घोराही झरेका थियौँ । अब घोराहीमा केही अल्मलिएपछि हामी लमइतर्फ तन्कियौँ । दाङ उपत्यका नेपालको एउटा सुन्दर उपत्यका लाग्यो । यसबेला मलाई तलको भनाइ उदृधृत गर्न मन लाग्यो --
यसरी हामी सात जिल्ला पार गर्दै २ बजे लमइमा पुगेर एउटा होटलमा छिरी रोटी-तरकारी खायौँ । अब हामी सुन्दरबारी, पहरुवा, पिपरी, बिजौरी, मौरीघाट, मसुरिया, बराखुट्टी, लालमटिया, पाखापानी हुँदै भालुवाङ आइपुग्दा ३.४५ भएको थियो समय । कपिलवस्तुको चन्द्रौटा हुँदै अगाडि बढेर हामी ५.४५ बजेको समयमा तिनाउ खोला तरेर बुटवल प्रवेश गरेका थियौँ । यसरी ६.३५ बजे नवलपरासी दाउन्ने पहाड हुँदै ८ बजेको समयमा प्रगतिनगर - घर प्रवेश गरियो । नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र दाङ जम्मा ७ जिल्लाको हाम्रो रमाइलो यात्रा पाँच दिनमा पूरा भएको थियो । अन्त्यमा, स्वर्गद्वारीबारे दुई श्लोक कविता --
अध्यक्ष ः विश्वनारी नेपाली साहित्य सम्मेलन समिति, लु.अ.
एउटा बहुमूल्य काव्य कृति
लेख्नलाई मनमा चोट
हाम्रो देशमा एउटा बुद्ध, जन्म्याथ्यो रे हो र आमा?